Soo dejisan SlimDrivers 2.3.1 – Vessoft
Soo dejisan SlimDrivers
SlimDrivers – software haboon ee update wadayaasha ah ee nidaamka. Software ayaa scan nidaamka, si wax ku ool lafaguraa xogta ku saabsan darawal iyo bandhigayaa liiska versions diyaar u casriyeeyo. SlimDrivers awood u isticmaala si ay u abuuraan faylasha gurmad iyo guurto darawallada in liiska, taas oo ka qaadayey ma updated doonaa. Software waxa ku jira module jadwal u ogolaanaya user si dejinta wadayaasha si toos ah updates. SlimDrivers ta khayraadka habka ugu yar oo fudud si ay u isticmaalaan interface.
Si tayo leh lafaguraa xogta ku saabsan darawal
Darawaliinta Automatic updates
Create faylasha gurmad
Sahal in la isticmaalo interface
SlimDrivers Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... DriverMax 8.33
English, Español, 中文, 日本語... Pale Moon 26.1.1 Stable iyo Portable